प्रभू बचत, कुबेर बचत, स्टाण्डर्ड सेभिङ् लगायत थप १२ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाः उठाउन पर्ने दायित्व १ अर्ब ९६ करोड ? - Aathikbazarnews.com प्रभू बचत, कुबेर बचत, स्टाण्डर्ड सेभिङ् लगायत थप १२ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाः उठाउन पर्ने दायित्व १ अर्ब ९६ करोड ? -
नेपालमा च्याउ झै उम्रेका सहकारी संस्था भित्र यति सम्म विकृती बढेको छ की त्यो हेर्दा मुटु नै ढुकढुक हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । गरिब र सर्वसाधारण जनतालाई महंगो ब्याज दिने लोभमा पैसा उठाउने र दुरुपयोग गर्ने दर्जनौ सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषण गरिएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । केही समूह र व्यक्ति मिली रातारात खोलिएका सहकारीहरुको यस्तो ठगी धन्दाले गरिब जनताहरुको रुवाबासी छ भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला । भनिन्छ गरिब र सर्वसाधारण जनताले चुलो बाल्ने रकम कटाएर सहकारीमा दैनिक रकम जम्मा गरेको बचत माथी सहकारीका सञ्चालकहरुले आँखा गाँडेपछि बचतकर्ताहरुको उठिबास भएको देखिन्छ । तर, राज्य बोल्दैन कारण के हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू ?
सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् भन्दा फरक पर्दैन । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरि रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु हामीसंग छन् भने अर्कोतर्फ तिनै सहकारी विभिन्न कारणहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको भेटिएको छ । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ। एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको देखिन्छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् । भन्दा फरक पर्दैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण विभिन्न सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति तातेको छ मन्त्रीलाई भेटेर समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा घर जग्गा र शेयरमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा नै हुने गरेको देखिन्छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् । भन्दा फरक पर्दैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण विभिन्न सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति तातेको छ मन्त्रीलाई भेटेर समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यससँगै बचतकर्तामा रकम फिर्ता आउँछ भन्ने आश केही बाँकी देखिन्छ ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित उक्त सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्या ग्रस्थ रहेको सहकारीहरुबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने उठाउन बाँकी दायित्व रकम १ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित रहेका उक्त सहकारीमा हालसम्म १ हजार २८३ सदस्यहरुको रकम भुक्तानीका लागि माग दावी परेको भेटिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मन्त्रालयले रकम असुली गरेर पीडितहरुलाई दिलाउने कुरामा प्रतिवद्ध जनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले पंक्तिकारसंग बताए । उनले भने, ‘हामीले १२ समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारीहरुमा भएको कामको प्रतिवेदन, समस्या चुनौती र समाधानका उपायहरुको आदि समेटेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं । रकम असुली गरेर पीडितहरुलाई बुझाउन अग्रसर हुने कुरामा मन्त्रालयको साथ सहयोग रहन्छ भन्ने आश छ । सो समितिले १२ वटा सहकारी संस्थालाई यसअघिनै समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गरिसकेको देखिन्छ । स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ रहेका छन् । त्यसैगरि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरुमा चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, ओरेण्टल सहकारी लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेको भेटिएको छ । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित उक्त सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्या ग्रस्थ रहेको सहकारीहरुबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने उठाउन बाँकी दायित्व रकम १ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित रहेका उक्त सहकारीमा हालसम्म १ हजार २८३ सदस्यहरुको रकम भुक्तानीका लागि माग दावी परेको भेटिएको छ । तर, यो रकम उनीहरुले पाउने कि नपाउने निश्चित छैन ।
उहाँका अनुसार ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम रहेका पीडितहले पैसा पाइसकेका छन् । १० हजारभन्दा माथिका बचतकर्ताहरुको ११ प्रतिशत र ६ प्रतिशतले गएको छ । लुनिभा सहकारीको ५२ लाख रुपैयाँ वितरणको अवस्थामा रहेको छ ।
सहकारीको दायित्व रकम ८ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समितिको तथ्याङक अनुसार कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा १० जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । यस सहकारीको दायित्व रकम १ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेकोे देखिन्छ । समस्याग्रस्त घोषित चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा रकम माग दावी गर्ने बचतकर्ताहरुको संख्या १४ रहेको छ । जसको दायित्व रकम १ करोड ६५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित रहेको स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा १७५ जना बचतकर्ताले रकम माग गरेका छन् । जसको साँवा, ब्याज, शेयर र कर्जा समेत गरी २१ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दायित्व रकम रहेको छ । त्यस्तै, प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभमा ३५१ जनाले बचतकर्ताले रकम माग गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ९६ करोड ३० लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ । भन्दा फरक पर्दैन । प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा माग दावी गर्ने बचतकर्ताको संख्या १३८ रहेको छ । यस सहकारीको दायित्व रकम २६ करोड ७१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त घोषित रहेको कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा ५१ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ४ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५७ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ८ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समितिको तथ्याङक अनुसार कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा १० जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । यस सहकारीको दायित्व रकम १ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेकोे देखिन्छ । समस्याग्रस्त घोषित चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा रकम माग दावी गर्ने बचतकर्ताहरुको संख्या १४ रहेको छ । जसको दायित्व रकम १ करोड ६५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ । भन्दा फरक पर्दैन । समितिको तथ्याङक अनुसार भेगास बचत तथा ऋण सहकारीमा १७ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ३ करोड ३० लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीमा रकम माग दावी गर्ने बचतकर्ताको संख्या १६ रहेको छ । जुन सहकारीको दायित्व रकम १ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
सहकारीको दायित्व रकम ९ करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लुःनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा २१४ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । जसको दायित्व रकम १५ करोड २९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ सहकारीलाई सरकारले मर्जरमा जाने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएपछि सहकारीहरु पनि मर्जरतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ । सहकारीहरु मर्जरमा जाँदा थप मजबुद हुने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त घोषित सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २४० जना बचतकर्ताहरुले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ९ करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लुःनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा २१४ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । जसको दायित्व रकम १५ करोड २९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ सहकारीलाई सरकारले मर्जरमा जाने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएपछि सहकारीहरु पनि मर्जरतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ । सहकारीहरु मर्जरमा जाँदा थप मजबुद हुने देखिन्छ । तर, केही समस्याग्रस्त सहकारीका कारण सहकारी अभियानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बन्न थालेको देखिन्छ । केही सहकारीका कारण समग्र सहकारीलाई एउटै सोच्ने परिपाटी बढेको देखिन्छ । राज्यले तत्कालै सहकारीबाट ठगीएका जनताका बारेमा सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन । सरकार जनताले भोट दिएर बनाएको त होला नि हेक्का होस् । फेरि चुनाव आउँदै । सचेत भया ।
आम्दानी बढेसँगै मेगा बैंकको नाफा ३८ प्रतिशतले बढ्यो, खराब कर्जा घट्यो
नबिल बैंकले गर्यो राष्ट्रिय युवा परिषद् र पञ्चेश्वोर गाउँपालिकासँग सम्झौता
सुजुकीको ह्याप्पी न्यू कार ग्राहक योजना सुरु
नेपाल बंगलादेश बैंकको कामु प्रमुख कार्यकारीमा भुपेन्द्र पाण्डे
बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो पटक एनएमबिले शुरु गर्यो एआईमा आधारित भिडियो केवाईसी
नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा ८४ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब २९ करोड, खुद ब्याज आम्दानीमा गिरावट